‘फेसबुक कमेन्ट पछिको लभ’ – KarnaliPost Daily
‘फेसबुक कमेन्ट पछिको लभ’
२१ माघ २०७४, आईतवार ०७:३९ February 4, 2018 by Karnali Post Daily
धोकेवाज आदि आदि । कतिमा प्रशस्तै गालि थिए । मेरो मनले सोच्छ हरे के भयो यस्तो । किन रिसाई अनुसा ? मनमनै प्रश्नको वर्षाद हुन्छ । शरिरभित्रै भुईचालो आउछ । मन उथलपुथल हुन्छ । हतपत अनुशाको नंम्बर डायल गर्छु । मोबाइमा लेडिजको आवाज आउँछ तपाईको ब्यालेन्स रकम कम भैसकेको छ कृपाया…….। कठै मेरो हविगत । भुइचालो पछि राहत नपाएको पिडित भन्दा कम्ताको भएन ।
हिजो आफ्नै भनेको, आज उस्तै सोचेको, भोलीका लागि भनेर अनेकौ सपना बुनेको आफ्नै प्रेमिकाबाट आएका थिए त्यस्ता म्यासेजहरु । मात्र मोवाइलको म्यासेज बक्समा । मोबाइल खल्तिमा राख्छु । अचानक म थाक्छु । भारि बने ति सात आठ वटा म्यासेजहरु मेरालागि । शरिरबाट चिटचिट पसिनाहरु आउन थाले ।
लाग्यो बाध्यताले म पहाड बोकिरहेको छु । अनि थिचिदैछु प्रत्यके पाइलाहरुमा । भूलवस हो की या मेरो कमजोरी नै पो भयो कि ? कहि कतैबाट केहि गल्ति पो गरियो की । दुई चार दिन यताका दिनचार्य केलाउन थाले । मेरो दैनिकीमा म आफैले आफ्नो कुनै खोट भेटाइन कमसेकम । तर उस्ले भने केहि भेटाएको हुनुपर्छ । नत्र किन यति आगो भएकी होली उ ? जान्नलाई तत्काल केही उपाया आएन । उस्को घरसम्म जान सकिने अवस्था थिएन । मोवाइलमा ब्यालेन्स थिएन । यत्ति हो मनमा बेचैनि बढिरहेको थियो ।
अफिस जान खास मन लागेको थिएन । नगइ नहुने । नगए बजारको बसेरो नहुने । बजार नबसे पढाइपनि नहुने । हैट…. बचैनि बढेको बढ्यै । के भएको यस्तो । उता अनुशाको अनुहार झल्झली मानसपटलमा आइरहन्छ । आवेश र कुण्ठा मिश्रीत मुहार कल्पना गर्न थाल्छु । नजिक भैदिएको भए जिस्काइदिने थिए । रिसाउदा झनै राम्री भनेर गित गाइदिने थिए । एक मुठ्ठि मुस्कान फुस्किन्छ मुहारबाट । फेरी आफ्नै हरिविजोक हेर्छु । मनमनै प्रश्न गर्छु किन एकाएक अनुशाका यस्ता म्यासेज आए ? हा……! के गरेको छु र मैले ? अनुशाले ठट्ट गरेकी होली के । मनलाई आश्वस्त बनाउछु । त्यपछि अफिस जान बाटो खुल्छ । अफिसमा दिनभरि गर्नुपर्ने कामको चाँग लागएर राखेका रहेछन् म्यानेजरले । लुरुलरु निश्किए काममा । सदरमुकाममा रहेका शौचालयहरु व्यवस्थित तरिकाले संचालन हुन नसक्नुमा दोषि को भन्ने विषयामा जनआवाज संकलन गर्न लागे ।
स्टुडियोबाट बाहिर निस्कनासाथ फोनको घन्टि बच्छ । हेर्छु अनुशाको रहेछ । छिटो छिटो रिसिब गरे । अलि सुनिएको थिएन । भोलुम बढाउछु । हतारहतार आफ्ना कुरा बताउन थाल्छु । हेरन बिहान तिम्रो फोन आएको रहेछ । भाइहरुले काटिदिएछन् । मेरोमा ब्यालेन्स थिएन पछि सम्पर्क गर्न सिकन । अनि तिम्रो म्यासेजपनि आएको रहेछ । के भयो र ? के लेखेको त्यस्तो ? सायद फोन काटिएपछि तिम्लाई रिस उठ्यो होला । सरि ल…..। उताबाट ठूलो आवाज आँउछ चुप…. चुप….धरै बाहाना बनाउ पर्दैन ।
छि…… तिमी यस्तो छौ भन्ने सोचेको पनि थिइन । आखिर आफ्नै हैसियत देखायौ है । धिक्कार छ मलाई तिमीजस्तो निच मान्छेलाई चिन्न भूल गरेछु । हरे.. कुरा के हो पहिला त्यो त भन । म आदेशात्मक तर नरम भावमा बोल्छु । किन यति आवेशमा बोलीरहेकी छौं ? आन्जानमा मेरो त्यस्तो केही कमी कमजोरी भएको हुनसक्छ । मलाइ थाहा छैन तर के गल्ति गरे त्यो त बुझ्न पाउ । मेरो बोली सकिएको थिएन । उ फेरी रुखो भाषामा भन्छे । भयो अव सकियो । यो भन्दा बढि सुन्नु छैन मलाई । फोन कट्छ । म छक्क पर्छु । हेरेको हेरै हुन्छु ।
अलि पहिलेदेखिनै हाम्रो प्रेम सम्बन्धमा केहि असम्झदारी थियो । अनिशाका सबै आफन्तले उस्लाई म देखि टाढा बनाउन चाहन्थे झनै भईदियो पनि त्यस्तै । आगोमा घिउ थप्ने काम मबाटै भएछ । मैले मायालाई फेसबुकमा गरेको ठट्यौली कमेन्ट देखाएर नाना थरि कुरा लगाएछन् । उस्का काका काकीले । भड्काउनु भड्काएछन् ।
यो कुरा धेरैपछि मलाइ उस्की साथि रमाले भनि । कमेन्ट पनि त्यस्तो नचाहिदो के नै गरेको थिए र ? मायाले पोष्ट गरेको फोटोमा मौसम अनुकुलका कुरा र मुस्कानको कुरा मात्रै गरेको थिए । यत्ति हो अलि ठट्यौली पाराका शब्दहरु थिए । यस्तो लेखिदिएकाृ थिए उस्को फोटो मूनिको कमेन्ट बक्समा । चिसो मौसमको न्योनो सम्झना सुन्दर मुहारमा मुस्कानको अभाव यस्तै यस्तै । फेरी खुला ठाउँमा गरिएको व्यवहार पनि त खुल्लै हुन्छ नि ।
समय वित्दै जाँदा पनि मन भारी नै छ । हलुका हुने छँटकाँट देख्दिन । प्रत्रकारीता चलिरहेकै छ । प्रगति केही छैन । इडिटरको गाली नखाएको कुनै दिन छैन । नयाँ सिक्न केही सकेको छैन । बरु सिकेका समेत विर्सिदै गैरहेका छन् । मन भने अनुसन्धनात्मक देखिएको छ । लाग्छ कँही उत्तर भटिहाल्यो भने कतै वैज्ञानिककै विल्ला पो हाल्छु कि । खाली मनले प्रश्न मात्रै उब्जाइरहेको छ ।
अनुशा सँगको सम्बन्धको यो पछिल्लो समय जानेको र सिकेको भने एउटै कुरा छ । त्यो हो प्रश्न गर्न र मेरो मनले सँधै प्रश्न गरिरहन्छ के फेसबकको कमेन्टकै कारण अनुशा यो निर्णय लिने अवस्थामा पुगि त ? आम छोरी मान्छेको यहि दृष्टिकोण हुने हो भने कति जोडि प्रेमी प्रेमिकाहरुले मेरो जस्तै दशा भोग्नु पर्ने हो ? अरु केही प्रश्न पनि उब्जिएका छन् अनुशाको लागि र म खुलेर भन्न चाहान्छु अनुशा, के खुला ठाउँमा गरिएको व्यवहार खुल्ला हुदैन ? यो तिमीले बुझ्ने कोसिस कहिले ग¥यौ ? के सकारात्मक दृष्टिोण हुन जरुरी छैन र ?
लेखक ः सागर परियारको यर्थात जीवनको भोगाईमा आधारित लेख हो ।
सागर परियार संगम
तातोपानि गाउँपालिका २, जुम्ला ।
हाल कारोबार राष्ट्यि दैनिक, निमार्ण संचार मिडिया, पश्चिम अनलाईमा कार्यरत कर्णाली पोष्ट अनलाईनका संरक्षक समेत हुनुहुन्छ ।